ဆူးလေနားက အတိတ်နေ့ရက်များဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် နေရာလေးတစ်ခု – YANGON STYLE
ဆူးလေနားက အတိတ်နေ့ရက်များဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် နေရာလေးတစ်ခု
ဆူလေးနားမှာ ကော်ဖီချစ်သူတွေ၊ နေရာ အထူးအဆန်း ရှာဖွေနေသူတွေကတော့ သိပြီးသားနေရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာလေးကို မသိသေးဘူး အခုမှသွားမည့်သူ သွားပြီးပေမဲ့ ဆိုင်မှာ အသစ်အသစ် အနုပညာလက်ရာ‌တွေထပ်တိုးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
နေရာလေးကတော့ ဆူးလေ မြို့လယ်ခေါင်နဲ့ မဝေးတဲ့နေရာလေးမှာပါ။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာတည်ရှိပြီး ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦနဲ့ မြို့ပြကို အပေါ်ကနေ ခံစားနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုပါ။ အောက်မှာ ဆိုင်းဘုတ်ပဲ ရှိတာပါ။ အပေါ်ကို တက်သွားရပြီး ရောက်သွားတာနဲ့
မြန်မာရဲ့ အငွေ့အသက်ကို ထိစေမယ့် နေရာလေးတစ်ခုပါ။ နိုင်ငံခြားသားများစွာ လာရောက်လေ့ရှိပြီး ကော်ဖီချစ်သူတွေ၊ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ချင်သူတွေ ဆိုင်ရဲ့ အနုပညာလက်ရာကို ခံစားချင်သူတွေ လာသင့်တဲ့ဆိုင်လေးပါ။
အနုလက်ရာတွေ ဘယ်လောက်မိုက်သလဲဆို ဆိုင်ရောက်ကတည်းက မမှာသေးဘဲ ငေးမိတဲ့အထိ အနုပညာမြောက်စွာ ပုံဖော်ထားတဲ့အရာများစွာနဲ့မို့ပါ။
အေးအေးဆေးဆေး ကော်ဖီသောက်ချင်သူတွေ၊ စာဖတ်ချင်သူတွေ၊ မိတ်ဆွေနဲ့ စကားပြောရင်း ဆုံလိုသူတွေ အကြိုက်တွေ့မှာတော့ အသေအချာပဲ။ စာအုပ်တွေ ထားပေးထားသလို သနပ်ခါးလိမ်းချင်သူတွေလည်း လိမ်းလို့ရတယ်။
ဆိုင်မှာ အနုပညာတွေခံစားရင်း ဂီတပိုး ဝါသနာပါသူတွေဆို စန္ဒယား၊ ပတ္တလား၊ ဂစ်တာတွေလည်း တီးလို့ရသေးတယ်ဗျာ။ လူငယ် အကြိုက်ကို အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းနိုင်သလို လာပြီးရင်တောင် ထပ်လာချင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နေရာလေး တစ်ခုပါပဲ။
ဆိုင်ရဲ့ ဖန်တီးမှုများအပြင် စားစရာတွေအနေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေ့လယ်စာတွေ စားလို့ရတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဈေးသင့်ပြီး နှပ်ကော်ဖီကို ၈၀၀ကျပ်နဲ့ ရနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သူတွေကတော့ နေရာအသစ်လေးမှာ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရမှာမို့ သဘောတွေ့မှာပါ။ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်တော့ နေ့လယ်ခင်းသွားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ဆိုင်ကတော့ ပိတ်ရက်မရှိဖွင့်ပြီး Work Shop တွေ တခြားလာလုပ်တဲ့ events တွေရှိရင်တော့ တစ်ခါတလေ ဆိုင်ပိတ်တတ်ပါတယ်။ Pansodan Scene Art Cafe Page ကလည်း အသိပေးပါတယ်။
ရိုးရာ လက်ကောက်ကွင်းလေးတွေ Key Change လေးတွေ ရောင်းချပြီး ၀ယ်ယူလို့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဒီ နေရာလေးကို သဘောကျနေမိတာပါပဲ။
“ Pansodan Scene Art Cafe”
No. 144 (Second Floor), Pansodan Street(Middle Block), Kyauktada, Yangon.
Open : 9:30 AM to 7:00 PM